ख्याल गराैं, धेरै केरा खाँदा पनि जान सक्छ ज्यान
एजेन्सी — एकैचोटि धेरै केरा खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि पुग्न सक्छ । एकचोटिमा ६ भन्दा बढी केरा खाँदा ज्यानलाई खतरा पर्छ भनिन्छ तर यो कत्तिको वास्तविक कुरा हो ? केरा वास्तवमा भिटामिन र मिनरलहरू भएको गुणकारी फल हो । स्वास्थ्यका लागि यो वरदान नै हो ।
केरामा पोटेसियमको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी पोटेसियमले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ । लन्डनमा बस्ने पोषणविद् क्याथरिन कोलिन्सका अनुसार, पोटेसियम शरीरको हरेक कोशिकामा उपलब्ध हुन्छ किनकि यो जीवनका लागि आवश्यक तत्त्व हो ।
तर शरीरमा पोटेसियमको मात्रा धेर वा कम भएमा मुटुको ढुकढुकी बिग्रन सक्छ । यसले पेटमा पीडा गराइदिन्छ । अमेरिकामा पोटेसियम क्लोराइड नामक रसायन इन्जेक्सनमार्फत पनि मानिसलाई दिइन्छ । शरीरमा यसको अधिक मात्रा भएमा हृदयघात हुने सम्भावना रहन्छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका अनुसार, व्यक्तिलाई दिनभरिमा ३५ सय मिलिग्राम पोटेसियम आवश्यक हुन्छ । एउटा केरामा लगभग ४५० मिलिग्राम पोटेसियम हुन्छ । अर्थात् एक व्यक्तिले दिनभरिमा सातवटासम्म केरा खाँदा
हुन्छ ।स्वास्थ्यविज्ञहरूले मिर्गौलाका रोगीले पोटेसियम अधिक भएका खानेकुराबाट टाढा रहने सल्लाह दिने गरेका छन् ।
महिलाहरूले भजन कीर्तन गरेरै बन्द गराए रक्सीको व्यापार !
पाकिस्तानमा लाइभ शो चल्दै गर्दा नेताले धकेले पत्रकार (भिडियो)